Waxqabadka Miisaanka: Sida aan kuugu Hagaajinay 2019 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waxqabadka Miisaanka: Sida aan kuugu Horumarinay 2019
Waxqabadka Miisaanka: Sida aan kuugu Horumarinay 2019
Waxqabadku waa badeecad aan waligeed ku dhammayn WP Engine, iyo 2019, waxaanu diirada saarnay mantra-kan oo sii kordhaysa.
Sanadka oo dhan, waxaanu horumar badan ku samaynay software-ka dhabarka ee madalkeena, kaas oo dedejiya wakhtiga jawaabta bog kasta oo aan si buuxda loo kaydin. Tani waxay siinaysaa macaamiisheena habka ugu wanaagsan ee lagu dhisayo boggaga WordPress ee cabbirka waxayna ka caawisaa goobahooda inay si degdeg ah u socdaan, ammaan badan, iyo karti ay ku koraan.
Cusboonaysiintayadii ugu dambeysay ee aaggan waxay ahayd ka saarista uopz-ka PHP ee kordhinta, taasoo keentay 10% horumarinta waxqabadka ee daahitaanka dambe, cabbirka la xiriira sida ugu dhakhsaha badan ee aan ugu adeegi karno codsiyada shabakadda. Uopz waxaa loo adeegsaday in lagu daro amniga iyo isku halaynta aaladeena. Markii naqshadeeyayaasha madal ay ogaadeen in ay sidoo kale ku darayso runtime over over, waxaan ikhtiraacnay xalal amni oo kale, iyo uopz waa la saaray.
Horumarkaas lagu sameeyay waxqabadka dhabarka wuxuu ku yimid ciribta go'aan aan sameynay horraantii Noofembar si aan ugu beddelno ~ 300,000 rakibaadda macaamiisha ku habboon PHP 7.3 - tallaabo aan bilownay si aan u hubinno in macaamiisheena ay helaan sifooyinka cusub iyo waxqabadka sare ee laga helay in ka badan. noocyadii dhawaa ee PHP. Go'aankani wuxuu macaamiisha WP Engine geliyey kaadiriin waxqabad aad u sarreeya marka loo eego inta badan isticmaalayaasha WordPress, kuwaas oo intooda badani ay ku shaqeeyaan PHP 7.0 ama ka hooseeya.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka aan helnay wax yar ka dib markii beddelka la dhammeeyay, qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena waxay arkeen waqtiyada jawaabta gadaal u roonaanta ~ 20% iyada oo aan wax dadaal ah ama tallaabo ah dhankooda:
Jaantuska kore, kaas oo tusaale u ah rakibida macaamiisha caadiga ah, waxaad arki kartaa celceliska waqtiga jawaabta hoos u dhaca in ka badan 750 millise seconds ilaa 550 millise seconds marka loo beddelayo PHP 7.3.
Dhawr bilood ka hor, Ogosto, waxaanu noqonnay Platform-ka Khibrada WordPress ee ugu horreeya si ay macaamiisha ugu rarto Qorshayaashayada Premium una guurto qalabka soo socda ee Google Cloud Platform. Tan waxa la sameeyay ka dib markii la qiimeeyay qalabka cusub oo la go'aamiyay in ay, dhab ahaantii, u matali doonto kor u kac wayn oo ku yimaada guud ahaan xawaaraha goobta macaamiisheena.
Waxaan ogaanay in marka lagu daro waxqabadka sare ee jira ee madalkeena ay bixiso, bogagga macaamiishu waxay bilaabeen inay si degdeg ah u soo shubaan — inta badan 40% dhakhso ah ama ka badan - mar labaad, iyada oo aan wax tallaabo ah laga rabin macaamiisha laftooda, oo aan wax lacag ah laga qaadin.
Jaantuska sare waa mid ka mid ah tusaalooyin badan oo aan soo uruurinay macaamiisha la kulma hoos u dhac weyn oo ku yimid wakhtiga wax kala iibsiga shabakada - qaddarka wakhtiga ay qaadanayso codsiga server-ka si loo dhammeeyo - taas oo u oggolaanaysa boggaga inay si degdeg ah u shubaan oo ay bixiyaan khibrad ka wanaagsan loogu talagalay isticmaalaha ugu dambeeya.
U beddelashada macaamiisha u heellan qalabkan cusub, qalabka xiga ee soo socda wuxuu ahaa diiradda noo socota qeybtii labaad ee 2019, waxaana hadda haysanaa in ka badan 4,000 oo macaamiisha ganacsiga ah oo u isticmaalaya inay ku xoojiyaan khibradahooda dhijitaalka ah. Helitaanka hadda ee bartamaha Mareykanka, UK, iyo Galbeedka Yurub, waxaan qorsheyneynaa inaan ballaarino gelitaanka kaabayaasha ciyaarta beddelka ah ee 2020.
Horaantii Ogosto, waxaan sidoo kale dhameystirnay dhowr horumar oo ay macaamiishu awoodeen inay ku arkaan labadaba maamulka WordPress-ka iyo shaashado-tafatirka nuxurka, iyo boggaga inta badan bogagga aan la heli karin, sida eCommerce iyo goobaha xubinnimada.
Hagaajintaas, oo hoos u dhigtay wakhtiga dhexdhexaadinta dhexdhexaadka ah ~ 15%, waxaa ka mid ah:
Isticmaalka xogta tirakoobka, oo aan diyaar u nahay sababtoo ah cabbirkeena ballaaran, iyo isu geynta xogta in ka badan 500,000 rakibaadaha WordPress, si loo habeeyo cabbiraadaha kaydinta opcode-ka ee PHP-ga si ka wanaagsan qiimaha caadiga ah ee "dhaqannada ugu wanaagsan".
Kordhinta xawaaraha akhrinta iyo qorista labadaba Shayga WordPress iyo Cache ku-meel-gaadhka ah iyadoo la hagaajinayo borotokoolka heerka hooseeya.
Hagaajinta weelka docker ee PHP v7.3 si loo helo xawaare badan.
Jaantuska sare, wakhtiga dhexe ee lagu bixiyo bogga aan la kaydin ayaa hoos uga dhacay ~700 millise seconds ilaa ~500 millise seconds, taasoo ka dhigan in ka badan 25% horumarinta waxqabadka.
Kuwa kor ku xusan waxay daboolayaan qaar badan oo ka mid ah isbeddellada baaxadda leh ee aan samaynay 2019, laakiin daraasiin kale oo wax-ka-beddel ah ayaa la sameeyay sanadka oo dhan, dhammaan magaca bixinta waxqabadka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee macaamiisheena. Markaad eegto dhammaan wanaajinta isku dhafan ee dhacay 2019, horumarka lagu sameeyay ganacsiyo badan oo macaamiisheena ka mid ah ayaa runtii ahaa mid cajiib ah.
Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa horumar ka badan 50% ee daahitaanka server-ka ee Qorshayaashayada Premium, kaas oo ay ku jiraan saamaynta qalabka soo socda ee Google.
In kasta oo aan runtii ku faraxsannahay hagaajinta waxqabadka ee aan ku sameynay 2019, wax qabadku waa shey aan waligiis ku dhammaan WP Engine, iyo marar badan, marka aan galno meel gaar ah, waxay iftiimisaa waxyaabo kale oo aan sameyn karno si aan u dhaqaajino cirbadda waxqabadka. xitaa ka sii badan. Horumarka sare ma ahayn mid ka reeban, waxaanan soo bandhigi doonaa horumaro badan 2020 oo dhan.
La soco—horraanta sanadka soo socda waxaan kula wadaagi doonaa wax qabad cusub oo xiiso badan markaan sii wadno hagaajinta iyo hagaajinta WordPress DXP.
Gudaha u gal maskaxda iibsadaha si aad u xoojiso iibinta e-ganacsiga
Hantidhawrka SEO ma u qalmaa lacagta?